15 Fikradaha Dakhliga Dadban ee kaa dhigi doona taajir 2022 - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn 15 Fikradaha Dakhliga Dadban ee kaa dhigi doona taajir 2022
Isha sawirka: bitcointhai.com
Fikradaha dakhliga dadban waa waxyaabaha aad qabato ama adeegyada aad bixiso oo aan daruuri u baahnayn joogitaankaaga jireed si aad u fuliso. Ma farageliyaan shaqadaada caadiga ah ee 9 ilaa 5, badanaana, waxay u baahan yihiin shaqo "firfircoon" yar.
Tusaale ahaan, haddii aad tahay Abuuraha Dijital ah (mid abuura alaabada dhijitaalka ah), waxaad abuuri kartaa ebook ama koorso muuqaal ah (kaas oo u gudbi doona qayb macluumaad ah oo ku saabsan shay gaar ah dhagaystayaashaada), ka dibna u dhig iib website-kaaga, gacanta warbaahinta bulshada ama dukaanka online-ka ah.
Shaqada kaliya ee lagaaga baahan yahay waa inaad sii wadato cusbooneysiinta nuxurka ebooks-kaaga iyo koorsooyinka fiidiyowga waqti ka waqti si ay iibsadayaashaadu ula socdaan macluumaadka ay helaan.
Habkaas, waxaad lacag ku sameysaa xitaa adigoon joogin jir ahaan si aad u barato iibsadayaasha alaabtaada, waxaad sidoo kale heleysaa digniinaha deynta xitaa markaad huruddo.
Inaad haysato shaqo 9 ilaa 5 ah oo mushahar fiican leh oo leh gunnooyin soo jiidasho leh aad ayay u fiican tahay, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaanay ku siin xasilloonida dhaqaale ee aad rabto.
Natiijo ahaan, waxaad go'aansatey inaad la timaado fikradda dakhliga dadban oo ku siinaya dabacsanaan iyo lacag caddaan ah oo dheeraad ah sidoo kale.
Bilawga, waxa laga yaabaa inaadan kasbanayn lacag aad u badan marka la eego fikradaada dakhliga dadban laakiin u samaynta si joogto ah muddo dheer waxay kaa dhigi kartaa inaad hesho xoriyad dhaqaale.
Baadhid: 7 Siyaabood Oo Lacag Lagu Helo Si Aad Iskuulka U Aadid | Hubaal Dakhliga Dadban
Waa maxay sababta fikradda dakhliga dadban?
Faa'iidooyinka lahaanshaha fikradda dakhliga dadban waa badan yihiin. Habkan la raadinayo ee dakhli soo saarka ayaa leh faa'iidooyin badan oo ku lifaaqan - laga bilaabo dabacsanaanta inaad ku shaqeyso xawaarahaaga, iyo lacagta caddaanka ah ee dheeraadka ah ee aad naftaada u sameyso, dadaalka yar ee loo baahan yahay iyo sidoo kale qadarka yar " firfircoon" shaqada aad qabato iyo wixii la mid ah.
Dakhliga dadban, waxaad lacag ka heshaa aagga raaxada, iyo xitaa markaad huruddo.
Dakhliga dadban kaliya ma kordhiyo jeegaga mushaharka caadiga ah, sidoo kale, faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah dabacsanaan, xasillooni maaliyadeed, iyo ammaan.
Hubi Sidoo Kale: 15 Fikradaha Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican ee Lacag La Helo Intaad Hurdo 2022
Shaqooyinka Dakhliga Dadban ma kaa dhigi karaan taajir?
Haa Haddii aad ka helayso jeegaga mushaharka ah ee shaqada 9 ilaa 5 iyo haddii kale, dakhli dadban ayaa kaa dhigi kara qani leh walaac iyo dadaal yar.
Haddii aad raadinayso inaad naftaada u dhisto hanti waarta, markaa waa inaad tixgelisaa inaad bilowdo shaqo dakhli dadban.
Waxaa jira fikrado dakhli oo dadban oo kala duwan si aad u dhisto hantida, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad waqtigaaga gelisaa oo aad baartaa iyaga oo go'aan ka gaarto midka aad dooraneyso.
Xusuusnow, ma dhisi kartid hanti adigoo isticmaalaya hal il dakhli, waana sababta ay tahay inaad tixgeliso fikradda dakhliga dadban.
Arag sidoo kale: 20 Kordhinta Browser Dakhliga Dakhliga Ugu Fiican 2021
15 Fikradaha Dakhliga Dadban ee kaa dhigi doona taajir
Habkan la raadinayo ee dakhli-abuurka ayaa u ekaan kara baahi iyo jahawareer. Si kastaba ha ahaatee, waxa jira fikrad dakhli oo dadban oo aad bilaabi karto maanta iyadoon loo eegin heerka aad hadda joogto ama waxaad qabato.
Waxa jira kuwo leh maalgelin yar, kuwaas oo aad ka samayn karto guriga ama arday ahaan. Kaliya soo ogow kuwa ku habboon xirfadahaaga oo hubi inaad u heellan tahay shaqada.
Si kasta oo ay tani u muuqan karto mid xiiso leh, waxay u baahan tahay barbaarin badan bilowga hore. Ka dib markii ay qasab tahay in aad koriso ilaa xad, waxay bilaabaan inay kuu soo saaraan dakhli joogto ah mustaqbalka fog.
Fiiri fikradahan dakhliga dadban ee kaa dhigi doona qani.
1. Iibiya alaabta dhijitaalka ah
2. Bilow ganacsi suuqgeyn xiriir la leh
3. Iibin DIY/ alaabta gacanta lagu sameeyo
4. Maalgeli guryaha
5. Ku bilow ganacsi tagsi baabuurkaaga
6. Noqo qof daadiya
7. Bilow blog
8. Fur koontada deebaajiga oo go'an
9. Isku qor sidii macalin luqadeed online ah
10. Noqo mid saameyn ku leh baraha bulshada
11. Noqo madax-banaani
12. Maalgelinta beeraha
13. Samee meherad xambaara
14. Cunto iibiya
15. Mini soo dejinta
1. Iibiya Alaabta Dijital ah
Alaabooyinka dhijitaalka ah waa hanti aan la taaban karin ama qaybo ka mid ah warbaahinta oo laga yaabo in lagu iibiyo onlayn marar badan laakiin aan la taaban karin. Waa badeecooyin la soo dejisan karo oo ah qaab MP3s, PDFs, fiidiyowyo, fur-in, iyo qaabab.
Fikraddan dakhliga dadban ee leh maalgelin yar waxay u baahan tahay dadaal yar. Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay waa inaad abuurto badeecada dhijitaalka ah (podcast, koorsada fiidiyowga, ebook, iwm) oo aad u dhigto iib onlayn.
Sidan, waxaad ku iibin kartaa si isdaba joog ah adiga oo aan jir ahaan joogin, inkastoo aad u baahan doonto inaad cusboonaysiiso nuxurka waqti ka waqti.
Waxyaabo kale oo wanaagsan oo ku saabsan iibinta alaabada dhijitaalka ah ayaa ah in aysan ku koobnayn meel gaar ah (waa ay heli karaan qof kasta iyada oo aan loo eegin goobta uu joogo) oo aad sii waddo iibsi joogto ah ilaa inta badeecada dhijitaalka ah ay ku sii jirto khadka.
Tani waa fikrad dakhli oo dadban oo weyn oo loogu talagalay ardayda.
Akhri Sidoo kale: 30 Barnaamijyo Dakhli oo Dadban si Lacag Loogu Sameeyo Intaad Joogto | 2021
2. Bilaw Ganacsi Suuqgeynta Xiriirsan
Suuqgeynta affiliate waxay la xiriirtaa kasbashada komishanka talo bixinta badeecada ama adeegga tafaariiqda. Waa mid ka mid ah shaqooyinka dakhliga dadban ee ugu kobcaya ee dhab ahaantii shaqeeya.
Hal shay oo wanaagsan oo ku saabsan suuqgeynta xiriirka la leh ayaa ah in aad lacag hesho marka ay dadku iibsadaan alaab ama adeeg lagu taliyey. Marka laga reebo taas, way fududahay in la maareeyo oo waxay ku lug leedahay khatar hoose (ma aha wax lacag ah si aad u noqoto suuqgeyn xiriir la leh).
Suuqgeynta affiliate waa shaqo abaal-marin leh oo dakhli badan kuu soo saari doonta. Uma baahna maalgelin maaliyadeed, kaliya wakhtigaaga ayaa ah waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad tan ufuliso.
Arag sidoo kale: 20 Hustles Side -bixinta Lacagta Badan ee Jarmalka Hada waad Bilaabi kartaa
3. Iibiya Alaabaha DIY/gacanta lagu sameeyo
Iibinta alaabta DIY/gacanta lagu sameeyo ayaa bilow fiican u ah samaynta dakhli dadban.
Balaayiin qof oo maanta ku xiran internetka, waxaad sameyn kartaa lacag la taaban karo haddii aad bilowdo ganacsi online ah oo aad ka sameyso alaab qurux badan (waxay noqon kartaa alaab qurux badan, qalab isku xiran, iwm) oo aad iibiso dukaan online ah.
Tani waxay u baahan kartaa qadar yar oo lacag ah si aad u iibsato alaabta aad u baahan tahay. Waqtigaaga ayaa sidoo kale loo baahan doonaa.
4. Maalgelinta Hantida ma guurtada ah
Hantida ma-guurtada ahi waxa ay ahaan jirtay wayna sii ahaan doontaa hab waara oo lagu dhiso hantida. Waxay ahaan jirtay ganacsi adag in la qabto sababtoo ah waxay u baahan tahay khibrad, waqti, iyo dadaal badan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa hadda jira barnaamijyo maalgashi oo hanti ma-guurto ah oo loo isticmaali karo in lagu dhiso hantida aaggaaga raaxada.
Maalgelinta hantida ma-guurtada ah waxay ku lug leedahay iibsashada, iibinta, iyo kiraysashada guryaha la degay. Sidaa darteed, waxaad go'aansan kartaa inaad ku lug yeelato midkood ama dhammaantood.
Intaa waxaa dheer, waxaad faafin kartaa faylalkaaga adiga oo maalgashanaya suuqyo kala duwan sida Airbnb, Sujimoto, iwm.
5. Baabuurkaga ku billow meherad tagsi
Haddii aad tahay milkiile baabuur, tani waa fursad ay tahay inaad ka faa'iidaysato gaar ahaan haddii gaadhigaagu uu ku baarkinsan yahay geerashkaaga.
Waxaad lacag ka samayn kartaa adiga oo iska diiwaan geliya shirkadaha tagaasida ee xirfadlayaasha ah (sida Bolt, Uber, In-driver, iwm) oo aad siiso darawal khibrad leh oo samayn doona ganacsiga tagaasida iyo markeeda, ku siinaya boqolkiiba marka ay ku xiran tahay heshiiskii labadiinuba aad wada gasheen.
6. Noqo Dropshipper
Ganacsiga la iska tuuro waa hab fudud oo lagu bilaabi karo dukaanka interneedka oo aad lacag ku samayn karto shaqo yar ama la'aan.
kaliya waxa aad u baahantahay in aad doorato alaabta aad doonayso in aad iibiso oo iibiyuhu soo saaro, kaydiyo, baakadeeyo, una diri doono iibsadayaashaada.
Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ka fikirto halkan waa xayaysiinta.
Bilawga blog-ku waa hab kale oo wanaagsan oo lagu sameeyo dakhli dadban, inkasta oo ay u baahan tahay wakhti, dadaal, iyo heer khibradeed.
Ma fududaan lahayd marka hore sababtoo ah waxaad u baahan doontaa inaad dhisto daawadayaasha oo aad u abuurto taraafikada balooggaaga adiga oo si joogto ah u qoraya oo fahmaya waxa dhagaystayaashaadu jecel yihiin.
Waxa kale oo aad ku kasban kartaa balooggaga adiga oo ku iibinaya meel bannaan oo xayeysiis ah oo ku taal balooggaaga.
Kiis aanad garanayn sida loo bilaabo blog ama aadan rabin inaad u gudubto diiqada bilaabista mid, waxaad dooran kartaa inaad iibsato baloog horay u jiray oo leh dhagaystayaal horay loo aasaasay iyo socodka lacagta caddaanka ah.
Tani waa hal fikrad dakhli dadban oo aad bilaabi karto maanta.
8. Fur Koontada Deposit Go'an
Tani waa dariiq aan toos ahayn oo dakhli lagu soo saaro xitaa iyadoo leh jadwal 9 ilaa 5 ah. Koontada deebaajiga ee go'an waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku maalgeliso qadar lacag ah in muddo ah heerka dulsaarka la isku raacay.
Marka wakhtigu gaadho, waxa aad go'aansan kartaa in aad is-rog-rogto ama waxa lagugu soo celin karaa iyada oo ay dulsaar kasbatay.
9. Is-diiwaangeli sidii Macallin Luqad Online ah
Waxaad dakhli ka dhalin kartaa adiga oo noqota macalin luqadda khadka tooska ah. Dadka qaarkiis waxay door bidaan in ay cashar toos ah la qaataan macalinkooda si ay u fahmaan.
Dadka ka yimid wadamada aan ku hadlin Ingiriisiga sida Jarmalka, Faransiiska, Talyaaniga, iwm waxay galaan internetka si ay u raadiyaan macalimiin iyaga baraya Luqadda Ingiriisiga.
Ganacsatada iyo ardaydu waxay sidoo kale ka raadiyaan macalimiin online ah kuwaas oo ka caawin doona inay si fiican ugu hadlaan luqadaha aawadood ganacsi, dugsi, iwm.
Habkaas, waxaad sidoo kale dhistaa shabakadaada bulshada sababtoo ah waxaad la kulmi kartaa oo aad la xiriirtay dadka aduunka oo dhan.
10. Noqo Saameeyaha Baraha Bulshada
Saameeyayaasha warbaahinta bulshada waa dad leh muuqaal sare oo warbaahinta bulshada ah, tiro cajiib ah oo raacsan, iyo heerar sare oo ka qaybqaadashada warbaahinta bulshada waxayna kasbadaan samaynta qoraallo la kafaalo qaaday, suuqgeynta xiriirka, iwm.
Dabcan, tani ma noqon doonto mid sahlan in la qabto sababtoo ah waxaad u baahan doontaa xoogaa khibrad ah iyo sidoo kale faylal cajiib ah. Waxay si weyn u siiyaan dadka saameeya baraha bulshada.
Noqoshada saameyn ku yeelata baraha bulshada waa mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu dhalin karo dakhli dadban.
Freelancing waxay ku lug leedahay ku shaqaynta xawaarahaaga aagga raaxada. Waxaa jira dhowr goobood oo freelancing online ah.
Badankooda (tusaale ahaan, Upwork) waxay u baahan yihiin inaad leedahay xirfado dhijitaal ah ka hor intaadan bilaabin halka aaladaha sida Fiverr aysan u baahnayn xirfad dhijitaal ah si aad u bilowdo.
Markaa waxaad dooran kartaa mid kasta oo ku habboon oo ku bilow. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa iska diiwaan geliso madalkooda, buuxi faahfaahinta loo baahan yahay oo aad bilowdo soo jeedinta shaqo.
Waxa lagu shaqaaleysiin doonaa oo lagu siin doonaa saacadle ama toddobaadle, taas oo ku xidhan heshiiska aad la gashay macmiilka. Waxaad u shaqaysaa dadka si dhab ah taas oo ku siinaysa dabacsanaan.
Beeruhu waxa ay jireen tan iyo bilowgii aadamaha. Waxay ka kooban tahay beerashada kalluunka, dhaqashada digaagga, dhaqashada snail, iwm.
In kasta oo ay u baahan tahay wakhti iyo khibrad, waxaad shaqaaleysiin kartaa xirfadlayaal si ay shaqada u qabtaan inta aad gudanayso hawl maalmeedkaaga caadiga ah oo aad faa'iidooyinka guranayso.
Tani waa fikrad dakhli dadban oo xiiso leh oo dhab ahaantii shaqeysa.
13. Samee meherad alaab-qaadis ah
Adeegyada xawaaladuhu waxay ku lug leeyihiin gaarsiinta baakooyinka meelo kala duwan. Ku dhawaad ​​qof kastaa wuu isticmaalayaa ilaa inta wax la iibsanayo oo alaab laga soo qaadayo meel la geeyo meel kale.
Waxa aad ka samayn kartaa dakhli dadban adiga oo haysta dire qof wax soo qaadaya oo ka dhigaya alaab qiimo gaar ah inta aad ka helayso dakhligaaga.
Cuntadu waa shay uu qof walba isticmaalo, ha ahaado mid cayriin ama ha la diyaariyo. Waxaad dakhli dadban ka samayn kartaa raaxada gurigaaga ama inta lagu jiro saacadahaaga caadiga ah ee 9 ilaa 5 shaqada adiga oo shaqaaleysiiya qof kaa caawin doona iibinta cuntada ceyriinka ah ama diyaariya cuntada oo gaadhsiiya kuwa soo dalbaday.
Xaaladda cuntada la diyaariyey, waxaad aqbali kartaa amarada macaamiisha ilaa wakhti go'an oo maalinta ah oo aad joojiso dalabaadka si aad u keento amarradii hore loo qaatay.
Waxay ku iman kartaa qaab makhaayad online ah. Xaaladda cuntooyinka ceyriinka ah, waxaad shaqaaleysiin kartaa qof ka iibin doona macaamiisha ka dibna waxaad helaysaa faa'iidooyinka dhamaadka.
Halkan waxaa ah dariiqa kale ee ugu wanaagsan ee aad naftaada ugu abuuri karto dakhli dadban. Waa wax ku badan dhalinyarada iyo dadka shaqeeya sidoo kale.
Waxa ay halkan uga baahan yihiin waa inaad ka soo iibsatid dhawr badeecooyin waddan kasta oo aad doorato (si toos ah kuwa wax soo saarayaasha) oo aad u soo dejiso tiro lacag ah, ka dibna ka iibi macaamiisha inta aad faa'iidada haysato.
Intaa waxaa dheer, waxaad u baahan doontaa xoogaa lacag ah si aad u bilowdo fikraddan dakhliga dadban, nambarka gacanta oo shaqaynaya, talefan android/laptop ah, xidhiidh internet oo wanaagsan, iyo xogta moobilka si taas loo gaadho. Marka kuwaas oo dhan la helo, waxaad galaysaa dakhli dadban.
SU'AALAHA BADAN LA ISWEYDIIYO (Su'aalaha)
1. Ardaygu ma heli karaa dakhli dadban?
Haa Shaqooyinka dakhliga dadban ayaa ku siinaya dabacsanaanta waqtiga aad u baahan tahay inaad wax ku barato, muxaadaro, iyo wixii la mid ah. Waxay kaloo kaa dhigaysaa inaad ka madax bannaanaato waalidkaa.
2. Dakhliga dadban ma iga dhigi karaa hodan?
Haa Fikradda dakhliga dadban haddii si dhab ah loo qaato waxay kaa dhigi kartaa hodan.
3. Ma jiraan fikrado dakhli oo dadban oo leh maalgashi yar?
Haa Dhowr fikradood oo dakhli dadban ayaa u baahan maalgashi yar.
4. Intee in le'eg ayuu shakhsigu ka heli karaa fikradda dakhliga dadban?
Ma jirto jawaab sax ah su'aashan, inkasta oo dakhliga la soo saaro uu si tartiib tartiib ah ku siin doono xorriyadda dhaqaale ee aad rabto.
5. Xirfadahee ayaan u baahanahay si aan u dhaliyo dakhli dadban?
Inkastoo dhammaan shaqooyinka dakhliga dadban laga yaabo inaysan u baahnayn xirfado, waxaad u baahan kartaa mid ama qaar ka mid ah xirfadahan dakhliga sare leh si ay kuu caawiyaan. Waxay ka mid yihiin nuqul-qorista, naqshadeynta sawirada, horumarinta software, iwm.
Waxaad mushaharkaaga ku kordhin kartaa fikradaha dakhliga dadban 2021, sidoo kale waxaad ku dhisi kartaa hanti aad u badan oo aadan ku dhisi karin 9 ilaa 5 shaqadaada oo keliya.
Sidoo kale, waxaad go'aansan kartaa inaad ku darto shaqadaada 9 ilaa 5 ee dakhligaaga Jib ama aad ka tagto shaqadaada 9 ilaa 5 oo aad diirada saarto si buuxda shaqada dakhliga dadban.
Meel kasta oo aad doorato waxaad ka heli doontaa lacag badan. Waxa kaliya ee lagaaga baahan yahay waa inaad bilowdo.
33 Goobaha Kabaha Lagu Iibiyo Lacag Caddaan ah 2022 | Ha Waayin Waqtigaaga
Waa caadi in aad jeclaato kabaha marka aad ku aragto dukaanka oo aad gabi ahaanba lumiso dareenkaaga...